गुप्तचरका नयाँ प्रमुखको सम्पत्ति कति ? कसले बनाइदियो यति ठूलो घर ? - Dainik Nepal
गुप्तचरका नयाँ प्रमुखको सम्पत्ति कति ? कसले बनाइदियो यति ठूलो घर ?
दैनिक नेपाल २०७५ पुष २६ गते ६:३९
काठमाडौं, २६ पुस । सरकारले देशको गुप्तचरी गर्ने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ‘राअवि’का प्रमुख दिलिप रेग्मीलाई हटाएर नयाँ गुप्तचर प्रमुखको नियुक्ति गरेको छ ।
नयाँ गुप्तचर प्रमुखमा गणेश अधिकारीले हाजिर गरि काम शुरु गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको राअविको नियमावली नै संशोधन गरी सरकारले रेग्मीलाई हटाएको हो ।
यसअघि गुप्तचर प्रमुखको अवधि चार वर्ष रहने गरेकोमा अब भने तीन वर्षमा झारिएको छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्वित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की निकट रहेका रेग्मीले तीन वर्षको अवधिमा गुप्तचर विभागमा सिन्को समेत भाँच्न सकेका थिएनन् ।
उनले जुन सरकार बन्यो, त्यहि सरकारसँग नजिक हुन गलत रिपोर्टहरु दिने गरेका थिए । जसलाई पत्याउँदा सरकार नै बद्नाम हुने गरेको थियो । नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा धमाधम बढुवा र सरुवालगायत नीति निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढेका थिए । तर, गुप्तचर प्रमुख रेग्मीले कुनै पनि कार्य योजना ल्याउन सकेका थिएनन ।
गुप्तचर गर्ने निकाय नै पंगु बन्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो कार्यालय मातहत लगेका थिए । देशको आन्तरिक सुरक्षा र विदेशी चलखेलको सूचना संकलनका लागि गठन गरिएको गुप्तचरी निकाय नै रेग्मीका कारण पंगु बनेपछि सूचना संकलन हुनु त परै जाओस्, भएका सूचना पनि विदेशी दूतावासमा विक्री हुने गरेका थिए ।
त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलबाट भइरहेको अवैध सुन तस्करी, लागूऔषध कारोबार गर्ने विदेशी गिरोह, वेला वखत विदेशी आतंकवादी संगठनका सदस्य नेपालमा पक्राउ पर्दा समेत राअविले अहिलेसम्म कुनै सुईको पाउन सकेको थिएन ।
त्यस्तै तराइका भूमिगत संगठन, विप्लव माओवादीले फैलाईरहेको आतंकको सञ्जालको बारेमा पनि राअवि बेखवर थियो । जवकी भारतको गुप्तचरी निकाय ‘रअ’ देश विदेशमा निकै सक्रिय रहँदै आएको छ ।
भारतमा ‘रअ’ ले दिएको सूचनालाइ सरकारले तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्दछ । तर, नेपालमा भने गुप्तचर निकाय सूचना विहिन र भएका सूचना पनि गलत दिन थालेपछि रेग्मी हटाइएका हुन् ।
पछिल्लो समय रेग्मीको गलत सूचनाबाट आजित बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई भेट समेत दिन गरेका थिएनन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार रेग्मी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुग्दा हाल प्रमुख बनेका अधिकारी भने प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेर फर्किसकेका हुन्थे ।
अर्कोतिर, नयाँ गुप्तचर प्रमुखमा अधिकारीको नियुक्तिसँगै उनको सम्पत्तिका विषयमा चर्चा हुन थालेको छ । काठमाडौंको धापासीमा खडा गरेको आलिशान महल र जग्गा जमिनका बारेमा चर्चा हुन थालेको हो । गुप्तचर विभागको प्रमुख भएपछि अधिकारीको सम्पत्तिको स्रोत ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।
सक्रियता बढाउँदै दाहाल
कस्तो छ सिंगापुरमा प्रधानमन्त्रीलाई ? यसरी हुँदै छ उपचार
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा वृक्षारोपण सम्पन्न
भीरबाट ढुङ्गा खस्दा १ जनाको मृत्यु तथा ७ जना घाइते
नगरले गरेको ढलान वडाले फुटाउन खोजेपछि…